Ama-SA U19s adlulela kwi-U19 World Cup Super League
TAURANGA, NEW ZEALAND - JANUARY 17: Hermann Rolfes of South Africa celebrates after taking the wicket of Kirstan Kallicharan of the West Indies during the ICC U19 Cricket World Cup match between the West Indies and South Africa at Bay Oval on January 17, 2018 in Tauranga, New Zealand. (Photo by Hagen Hopkins-IDI/IDI via Getty Images)
Umsebenzi onobuqhawe kanye nokungaphumi nama-runs angu-99 emabholeni alinganayo, u-Wandile Makwetu, kanye no-4/33 onesibindi, kwi-spell sama-over angu-10 u-Hermann Rolfes kwenze isiqiniseko sokungena kwi-Super League sama-Coca-Cola South Africa U19s emuva kokuhlula abavikela isicoco, i-West Indies ngama-runs angu-76 e-Bay Oval ngoLwesithathu. I-South Africa engakahlulwa, ihlangana ne-New Zealand, ne-Afghanistan asebengenile kwisigaba esilandelayo se-ICC U19 Cricket World Cup.
i-South Africa ihlanganise u-282/8 ekupheleni kwama-overs abo angu-50 emuva kokushayiswa kuqala. Umphumela uhlanganiswe u-Makwetu nomdlali oshaya ezansi ozengamandla u-Gerald Coetzee (29 off 13 balls), u-Kenan Smith (22 off 46 balls) no-Jade de Klerk (21 off 12) emuva kokuphuma kwa-Jiveshen Pillay (47) ngasekuqaleni komdlalo.
Ama-Proteas anethemba aqale kahle nge-partnership yama-runs angu-56 phakathi kwa-Pillay no-Matthew Breetzke ngaphambi kokuthi u-Breetzke akhishwe ngokuphosa nokunqakwa kwa-Jarion Hoyte ngama-runs angu-18. Ukapteni u-Raynard van Tonder uhlulekile ukulandela u-147 awuhlanganisa emdlalweni odlulile, waphuma engawatholanga engakoranga.
Emuva kwalokho, umdlalo ushintshile ngesikhathi u-Pillay (47) ukhishwe (obstructing the field) emuva kokucosha ibhola walidlulisela ovimbayo ngesikhathi lima eduze kwama-stumps emuva kwe-inside edge. Okulandele lokho, u-Hermann Rolfes (17), okade eqala ukwakha i-partnership no-Makwetu uphume ngokunqakwa ngasekupheleni kwe-over yesi-20.
i-South Africa ibiku-112/5 (26.1 overs) emuva kokuthi u-Jason Niemand ephume nge-run out enama-runs angu-15, kwasala u-Makwetu okwaziyo ukushaya. I-innings iqhubekile emuva kokuthi aphunyuke kunqaka u-Jeavor Royal kanye nosizo oluvela ku-Coetzee, u-Smith no-De Klerk, bahlanganisa ama-runs angu-112 kuma-overs okugcina angu-10 ukufika kumphumela ovikelekayo.
i-Windies iphume yonke ngama-runs angu-206 kuma-overs angu-45.3 ekugcineni. u-Alick Athanaze (76 off 100 balls), u-Kirstan Kallicharan (44 off 50 balls) nabavula umdlalo u-Kimani Melius (24 off 42 balls) no-Keegan Simmons (20 off 21 balls) badlale kahle ngasekushayeni, kodwa ukuhlasela kwe-South Africa okuholwe u-Rolfes, kubathulisile ngesikhathi kubukeka sengathi bazoqhubeka bakhe incindezi. u-Coetzee no-De Klerk nabo badlale indima ngebhola, bathatha u-2/21 no-2/40 ngokulandelana kwabo.
Umdlalo wokugcina we-South Africa kwisixuku u-Group A ungoMgqibelo bedlala nelinye iqembu elingahluliwe, i-New Zealand enkundleni eyodwa. Uzovezwa ku-SuperSport 2 kusukela ngo-02:45 (SAST).
i-SA U19s ilungele inxenye yokulungiselela i-World Cup Abadlali bakutholile akade bekudinga kumdlalo wokugcina wamalungiselelo – u-Gwavu u-Mahatlane uyajabula ngenqubekaphambili yama-U19 ngaphambi kohambo lokuya kwi-World Cup "Ukusebenzisa amakhono” kuzo ukhiye wokunqoba i-final ye-Youth Tri-Series kusho u-Gwavu i-England U19 inqoba kabili idlala ne-SA nokho u-Breetzke ethole ikhulu i-SA U19 ibuye kahle nge-bonus-point, nokunqoba nge-Duckworth-Lewis Ama-SA U19 alungele ukukhuphula izinga kumdlalo wokuqala we-day/night Youth ODI ekhaya u-Coetzee no-Molefe bahlelela i-SA u19 ukunqoba nge-bonus-point u-Van Tonder ufuna ukucacisa kumdlalo wokuqala we-Youth Tri-Series Molefe uthatha ama-wicket amahlanu kumdlalo wesibili oqedwe imvula u-Van Noordwyk uthatha okuhle emdlalweni wokuzilungiselela omiswe imvula